वि. सं. २०७८ जेठ २२ गते, शनिवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २२ गते, शनिवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २२ गते १:२३ मा प्रकाशित
२०७८ जेठ २२ गते, शनिवार, ५ जुन २०२१। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष दशमी तिथि (प्रातः ६ः४३ बजेदेखि एकादशी)। रेवती नक्षत्र। चन्द्रराशि– मीन।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् – पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित राख्न सक्छ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। आफ्नो ठूलो भरोसाको फाइदा लिएर बाहिर जानुहोस् र केही नयाँ सम्पर्क र मित्र बनाउनुहोस्। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
भावनात्मक रूपमा तपाईं धेरै स्थिर हुनु हुँदैन – त्यसैले अरूको अगाडि कसरी व्यवहार र कुरा कसरी गर्नु भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। बच्चाहरुले अध्ययन र योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेर भविष्यको लागि सोच्नु आवश्यक छ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! तपाईंलाई आज आफ्नो जीवन साथी गुँड भन्दा मीठो छ भन्ने महसुस हुनेछ।
सामाजिक जीवनको भन्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर्क र टकराव अनि अरूमा अनावश्यक दोष खोज्नेबाट बच्नुहोस। रोमान्टिक चालले फाइदा हुनेछैन। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आज तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै राम्रो खाना वा पेय लिनु हुनेछ, जसले स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। कुराहरू नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो भाइको मद्दत गर्नुहोस्। संघर्षलाई अनावश्यक तरीकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंका प्रेमीको अत्यधिक माँग गर्ने व्यवहारले आज रोमान्स कम नै हुने सम्भावना देखिन्छ। आज आफ्नो जोडी तपाईंको लागि अति व्यस्त हुन सक्छन्।
तनावबाट छुटकारा प्राप्त गर्न आफ्ना बच्चाहरुसँग आफ्नो बहुमूल्य समय बिताउनुहोस्। तपाईंले बच्चाको निको पार्ने शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। तिनीहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली आध्यात्मिक र भावनात्मक व्यक्तित्व हुन्। तपाईंले आफैलाई पुन यौवन भएको महसुस गर्नु हुनेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुन। तपाईंको जोडी आज आफ्ना मित्रहरूसँग व्यस्त रहन सक्छन् जसले तपाईंलाई उदास बनाउन सक्छ।
आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग भावनात्मक बन्धन महसुस गर्न सक्नुभयो भने प्रेम सबै भन्दा राम्रो हुनेछ।
तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
आर्थिक स्थिति र वित्तीय समस्या भने तनाउको कारण बन्नेछन्। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। आफ्नो जोडीसित तपाईं आज फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ किनकि उनी यसको लागि योग्य छन्।
तपाईंमा धार्मिक भावना उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तपाईंलाई साधु-संतहरूबाट केही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने मन लाग्नेछ। आफ्नो जीवनमा एउटा उदात्त तालको फेशन बनाउनुहोस् र आत्मसमर्पणको मोल बुझेर हृदयमा प्रेम र कृतज्ञता राखेर सीधा हिंड्ने कला सिक्नुहोस्। यसले तपाईंको पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण बनाउनेछ। प्रेमी जीवन आज सुन्दर रूपमा साँच्चै फूल्नेछ। यो आफ्ना जोडीसित तपाईंको रमाइलो दिन हुनेछ।
सबै कुराहरू तपाईंतो इच्छा अनुसार अगाडि बढेकोले धेरै खुशीयाली भरिएको दिन। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। परिवार खुशी र शान्ति छ जस्तो देखिंदैन। कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
कोलेस्ट्रलको मात्रा धेर भएको आहार खानबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो। जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईंको परिवर्तित मनोवृत्तिले तिनीहरूलाई असीमित आनन्द दिनेछ। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।